‘के छ माईला ?’ यो शब्द सुन्दा कम्ति मज्जा आउँदैन ! तर, माईलाहरु अल्पसंख्या छन् । केही परिवारका माईला बाँकी छन् । केही पार्टीका माईला बाँकी छन् । थोरै संख्यामा
चैत्र २३ अर्थात् फाल-डल्लो-मार-मुङ्ग्रो-दे-दनादन-प्रतियोगिता…
स्वस्ती श्री महात्मा गौतम बुद्धका अनुपम क्रिपाले हाम्रा राष्ट्र्यि वर–बधु श्री धुर्मुस–सुन्तली फाउण्डेसनको आयोजनामा यही चैत्र २३ गते हुन गईरहेको ‘फाल–डल्लो–मार–मुङ्ग्रो–दे–दनादन–प्रतियोगिता’मा सहभागी भई मनोरञ्जन कमाउने, गौतम बुद्ध अन्तराष्ट्रीय क्रिकेट
शेखर काका राजनिती गर्नु हुन्न तर राजनीति जान्नु हुन्छ । आफ्नो जिवन कालमा भएका सबै आन्दोलनलाई नजिकबाट हेर्नु भएको छ । समर्थन गर्नु भएको छ । २००७ साल, २०१५, २०३६,
‘ग्रेटर नेपाल’ का एक्ला अभियन्ता फणिन्द्र नेपाल हुन् । करिव २० बर्ष लामो उनको यो अभियानले खासै चर्चा पाउँन सकेको छैन । भर्खरैमात्र उनले चिनदेखि स्विजरल्याण्ड पुगेर ग्रेटर नेपालको झण्डा
-मनोज गजुरेल- ‘बच्चा भएर पनि हाँस्ने हो ?’ अग्रजहरूको यो भनाइ सुन्दा यस्तो लाग्छ— हाँस्न पाउनु ‘बूढा’ हरूको मात्र अधिकार हो। बच्चाले रुन मात्रै पाउँछन् ! तर, सत्य के हो
आज शिवरात्री ! शिवरात्री भन्नासाथ मलाई एउटा घटनाले सधैँ झस्काई रहन्छ, त्यो हो – गाँजाको एक सर्को ! यो बिषय मैले पैलेपानी लेखेको हुँ, आजपनि दोहोर्याउदैछु । पढ्नोस्, शिवरात्रीमा गाँजा
-मनोज गजुरेल हाम्रो समाजमा फोन रिसिभका विभिन्न तरिका छन् । जस्तै: ‘हेलो’, ‘हजुर’, ‘नमस्कार’, ‘फलानो बोल्दैछु, नमस्ते’, ‘यस्’, ‘यस् प्लिज’, ‘भन्नोस्’, ‘अँ’, ‘अँ, भन्नोस्’, ‘भन्नोस् त’, ‘भनिहाल्नोस्’, ‘छोटकरीमा भन्नोस्’, ‘को हो ?’,
प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाउँने सजिलो काईदा…
-मनोज गजुरेल नेपालका भूकम्पपीडितहरूका लागि त्यस संस्थाबाट विनियोजित रकमको कार्य विवरण पठाएको छौं । आशा छ, हाम्रो टार्गेटेड ग्रुप, प्रभावकारी प्रोजेक्ट, मितव्ययी शैलीबाट त्यो संस्थाको संयोजक दंग पर्नुहुनेछ । श्रीमान् प्रोग्राम को–अर्डिनेटरज्यू,
को हुन् ती तीनजना ! किन खोज्दैछन् तपाईंको फोन नंबर ? चिन्नुहोस्…
सधैँ झैं यो बर्षपनि त्यस्तै मेसेज आयो – ‘तीनजना साथीहरुले तपाईँको नम्बर माग्दै थिए । (…..लामै म्यासेजको लिस्ट…..) ! यस्ता मेसेजको मैले कहिल्यै जवाफ दिएको थिइन । यो नयाँ सालमा
एमाले महाधिवेशनमा निहुँ खोज्न र उम्मेदवारी दिन दुवै पाईने, प्रतिनिधि…